Maxay yihiin Baalasha Istaraatiijiyadaada Suuqgeynta? | Martech Zone
Sabtida, Juun 1, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Shalay, waxaan bilaabay akhrinta buugga Nick Carter Laba iyo toban ilbidhiqsi: Sare u qaadida Baahidaada Ganacsi. Waan jeclahay isbarbar dhigga meheradda sida duulimaadka ku jira buugga oo Nick si fiican buu u sharraxay.
Mid ka mid ah doodaha ugu horreeya ayaa ah wiish. NASA waxay qeexaysaa wiishka sida soo socota:
Lift waa awooda sida tooska ah uga soo horjeedda culeyska diyaaradda isla markaana ku haysa diyaaradda hawada. Wiishka waxaa soo saara qayb kasta oo diyaaradda ka mid ah, laakiin inta badan wiishka diyaaradda caadiga ah waxaa soo saara baalasha. Lift waa xoog farsamo aerodynamic soo saaray by dhaqdhaqaaqa ee diyaaradda iyada oo hawada. Sababtoo ah wiishku waa xoog, waa xaddiga dulinka, oo leh baaxad iyo jiheyn labadaba. Wiishku wuxuu ku dhaqmaa bartamaha cadaadiska shayga waxaana loo jiheeyaa dhinaca toosan ee socodka.
Xalay, aniga iyo milkiile kale oo meherad leh waxaan cabnay xoogaa cabashooyin ah waxaanan kawada hadlaynay tamarta iyo diirada aan la saarnay ganacsiyadayada. Labada shirkadoodba sifiican ayey usocdaan, laakiin waxaa nalaga qaatay maalgashi aan caadi aheyn. Uma maleynayo in qofna ogaanayo, ilaa ay ka bilaabayaan ganacsi, waxa ay u baahan tahay. Laga soo bilaabo dhex-dhexaadinta keydka, cadaadiska ku saabsan qulqulka lacagta, arrimaha shaqaalaha, iibka, xisaabaadka iyo canshuuraha ks dadweyanaha ma oga in waqtiga aan dhab ahaan uga shaqeyno macaamiisheenna ay u baahan tahay wiqiyad kasta oo ugu dambeysa ee tamar ah.
Waa inaan ilaashano tamarta sida ugu macquulsan sidaa darteed marwalba waxaan leenahay matoorrada shaqeynaya meheraduna waa leedahay wiish. Khilaafaadka iyo dhibaatooyinka lama jiidi karo maxaa yeelay taasi waxay ku bixisaa tamar aad uga badan inta aan awoodno. Qiyaas duulimaad aad shidaal aad u badan ku bixisay si aad ugu dhaqaaqdo meeshaad u socoto… waad shilaysaa. Natiija ahaan, waxaan noqday mid aad uga go'aan iyo deg deg badan jawaabo iyo ficil intii hore.
wiish waa astaamaha aasaasiga u ah duulimaad kasta iyo qalab duulaya. Markii aan eegay meheraddayda, ayaa wiish of DK New Media waa, shaki la'aan, balooggan. Abuuritaanka balooggan wuxuu horseeday dhagaystayaasheena, buuggayga, kuhadalkeyga hadalka, shaqadayda shirkadaha maalgashiga iyo shirkadaha teknolojiyadda ee caalamiga ah, iyo shaqaalaynta shaqaalaheena iyo shaqadeena socota. Haddii ay jiri lahaayeen baalal ganacsigeyga, waxay ahaan lahaayeen balooggan.
Marka, iyada oo aan loo eegin sida xun ee maalin aan haysto, inta tamarta ah ee aan qaatay, sida culeyskeyga shaqadu u eg yahay, inta lacag caddaan ah ee ku jirta bangiga iyo waxa macmiilka ah ee aan lahaan karno, waxaan si joogto ah u hubiyaa in ganacsigeygu leeyahay wiish. Waan ogahay inay jiraan faahfaahino badan oo dheeri ah oo ku saabsan duulimaadka oo ay tahay inaan fiiro gaar ah u yeesho (Buugga Nick-na wuxuu iga caawinayaa inaan diirada saaro taas), laakiin waligay ma ilaawi doono aasaaska dhamaan shaqadeena - balooggan. Boggan ayaa noo oggolaaday inaan duulno oo waxay na keeni doontaa meel kasta oo aan dooneyno inaan tagno. Kaliya waa inaan hubiyaa inaan sii wado matoorradeedu inay socdaan oo aan sii wado inaan fuulno.
Maxay yihiin baalasha ganacsigaaga?
Jun 3, 2013 saacadu markay ahayd 9:29 AM
Mahadsanid. runtii waxtar ii leh